Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas bụ obodo dị nchebe ugbu a maka ndị ọbịa America
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Ndi akuko • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • WTN
Foto sitere n'ikike nke Bahamas Ministry of Tourism & Aviation
Ndị ọrụ Bahamas nke njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu nyere nkwupụta gọọmentị na Sọnde na nzaghachi na ndụmọdụ njem njem CDC emelitere site na United States.
Ndị ọrụ Bahamas nke njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu achọpụtala ndụmọdụ njem njem emelitere sitere na Lọ Ọrụ US Maka Nchịkwa Ọrịa na Mgbochi (CDC) na-ebelata ndụmọdụ njem ya maka Bahamas site na ọkwa 4 ruo ọkwa 3.
CDC na-enyocha ihe egwu dị ala n'ihi mbelata ọnụ ọgụgụ ikpe COVID-19 yana trajectory dị obere. Ọnụ ego mkpuchi ọgwụ mgbochi ọrịa na arụmọrụ na-ekerekwa òkè na mkpebi CDC nke ọkwa ndụmọdụ.
Ministri nke njem nlegharị anya, itinye ego na ụgbọ elu na-adụ ọdụ na, anyị, ọha mmadụ, enweghị ike ịhapụ nchekwa anyị - usoro ndị etinyere na-arụ ọrụ.
Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation Nkwupụta na Ndụmọdụ Njem CDC emelitere:
Nleba anya ga-adị mkpa ka ịkpachara anya ga-aga n'ihu na-adịgide adịgide iji hụ na nchekwa na-anọgide na-adị mkpa maka ndị bi na ndị ọbịa.
Mmelite na nso nso a na ntinye chọrọ dị ka ịgba mbọ hụ na ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke na ndị na-agbaghị ọgwụ mgbochi nweta ule COVID-19 na-adịghị mma (ma ọ bụ ule ngwa ngwa Antigen ma ọ bụ PCR), were ihe karịrị ụbọchị ise (5) tupu ụbọchị mbata na Bahamas. - jikọtara ya na mmachi n'àgwàetiti dị ka ọ dị mkpa - egosila na ọ ga-aga nke ọma n'ibelata mgbasa nke nje a.
" Njem nlegharị anya bụ ọbara ndụ akụ na ụba anyị, anyị lekwasịrị anya n'ịhụ na ụkpụrụ ndị dị na ya na-echekwa ndị ọbịa na ndị bi na ya," ka osote onye isi ala The Honorable I. Chester Cooper, Bahamas Minister of Tourism, Investments & Aviation kwuru. "Ndụmọdụ a wedara ala bụ ihe akaebe na ihe anyị na-eme na-arụ ọrụ - mana ọ pụtaghị na anyị nwere ike ịgbaghara n'oge mgbanwe a dị oke egwu. Enweghị m obi abụọ ọ bụrụ na anyị niile na-arụkọ ọrụ ọnụ, anyị ga-ahụ nnukwu uto n'ofe mpaghara njem anyị. "
N'ihi mmụba nke COVID-19, gọọmentị nke Bahamas ga-aga n'ihu na-enyocha agwaetiti n'otu n'otu ma wepụta usoro nchebe iji lebara okwu ụfọdụ ma ọ bụ spikes anya. Maka nkọwa gbasara usoro njem na ntinye nke Bahamas, biko gaa na Bahamas.com/travelupdates.
Anyị na-aga n'ihu na-agba onye ọ bụla ume ka ha mee akụkụ nke ha iji belata mgbasa: yi ihe mkpuchi, saa aka gị, gba ọgwụ mgbochi ma rube isi n'ichepụ anya anụ ahụ na usoro ịdị ọcha nke na-enyere aka chebe gị na ndị Bahamians ibe gị.
Ozi ndị ọzọ gbasara ihe na-eme na Bahamas na Nọvemba.